DataNumen: Politika famerenam-bola
Matoky tena tokoa izahay amin'ny kalitaon'ny vokatra sy serivisinay, ka manome ireto antoka telo manaraka ireto izahay ao anatin'ny 30 andro aorian'ny fividiananao, hahazoana antoka fa afa-po 100% ianao.
Manolotra ny tsara indrindra vokatra sy serivisy fanarenana angona eto amin'izao tontolo izao. Izany no antony namoronantsika ny Antoka fiantohana tsara indrindra ™ - Manome toky izahay fa ny vokatra sy serivisinay dia hahazo ny angon-drakitra farany ambony indrindra avy amin'ny rakitra, rafitra na fitaovanao. Raha tokony hahita fitaovana afaka mamerina angon-drakitra bebe kokoa noho ny anay ianao dia haverinay manontolo ny volanao!
Raha mila fanazavana misimisy kokoa, tsindrio azafady Eto.
Andramo alohan'ny hividianana antoka
Ny vokatray rehetra dia amidy amin'ny fomba fanandramana mialoha ny fividianana. Izany hoe, azonao atao ny misintona sy mampiasa ny kinova fampandehanana mba hamerenanao ny rakitrao maloto, maimaimpoana. Raha azo averina ilay rakitra dia hampiseho topy maso ny atiny sitrana ny kinova demo, na hamorona fisie fampisehoana na izy roa. Miorina amin'ny valin'ny kinova demo, azonao atao ny mahafantatra raha azo sitrana na tsia ny angona tadiavinao.
Avy eo, aorian'ny hividiananao ny kinova feno, raha toa ka tsy mifanaraka amin'ny valin'ny kinova demo ny rakitra apetraka amin'ny kinova feno dia haverinay ny kaomandinao.
Ny antoka 100% Fahafaham-po
Na dia manome toky anao foana aza ireo antoka roa etsy ambony ireo hahazoanao ny tsara indrindra sy ny most valiny fanarenana mahafa-po, mandeha lavitra kokoa isika, amin'ny fanomezana antoka 100% ny fahafaham-po. Raha misy antony dia tsy afa-po amin'ny vokatra na serivisy novidinao ianao dia afaka mahazo famerenam-bola feno.
Fanamarihana: mila manome ny anton'ny famerenam-bola amin'ny antsipiriany ianao. Raha ilaina dia takiana ihany koa ny fisie maloto tany am-boalohany ho an'ny tanjona fanamarinana ihany. Hotazonina tsiambaratelo 100% ny rakitrao sy ny angonao. Jereo ny politika fiarovana fiainan'olona ho an'ny antsipiriany bebe kokoa. Raha ilaina dia hanao sonia ny NDA miaraka aminao izahay hiantohana izany.